मेलम्ची खानेपानी निर्माणकै क्रममा लापरवाही भएको आशंका ! –
मेलम्ची खानेपानी निर्माणकै क्रममा लापरवाही भएको आशंका !
पानी परिक्षणको क्रममै गेट फुट्दा मानवीय क्षती भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणको क्रममा नै लापरवाही भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । पानी हालेको एक हप्तामै सुरुङको गेट फुटेर मानवीय क्षती समेत भएपछि स्थानीयले आयोजनाको निर्माणको क्रममा नै लापरवाही भएको हुनसक्ने आशंका गरेका हुन् ।
असार २१ गते परिक्षणका लागि पानी पठाइएको सुरुङको मुहान भन्दा करिब दुइ किलोमिटर तल अम्बाथान अडीटको १७ नं. गेट फ्ट्दा एक इन्जीनियरको मृत्य्ु भएको थियो भने एक सवारी चालक अझै वेपत्ता छन् । घाइते भएका अन्य दुइजनाको काठमाण्डौस्थित ग्राण्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । परिक्षणको लागि सुरुङमा पानी पठाएपछि हरेक घण्टा गेटको प्रेसर नाप्ने गरिएकोमा ३० गते १२ वजेको प्रेसर नाप्न जाँदा सो घटना भएको थियो ।
आफुहरुलाई जानकारी नै नगराइ आयोजनाले हतारहतार सुरुङमा पानी हालेको र सुरुङ गुणस्तर परिक्षण नै नगरी पानी हाल्दा यस्तो दुर्घटना भएको हुनसक्ने हेलम्बु गाँउपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताए । आयोजना निर्माण गर्दा नै गुणस्तरहिन काम गरेकोले यस्तो घटना भएको उनको जिकीर छ । अहिले थोरै मात्रामा पानी पठाउदा भएको दुर्घटनाले पुर्याएको क्षतीको अनुपातमा पछि सुरुङ पुरै पानी भरिएको बेलामा यस्तो दुर्घटना भएमा त्यसले सयौं बस्ती नै जोखीममा पार्न सक्ने भएकोले यसको गुणस्तर अध्ययनको लागि एउटा स्वतन्त्र छानविन समिती बनाइनुपर्ने, त्यसमा हेलम्बु गाँउपालिकालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने र त्यसपछि सु्रक्षीत देखएिमा मात्रै पानी पठाउनुपर्ने बताए ।
अहिले नै यसरी सुरुङ फ्ट्दा नदी किनारमा रहेको बस्तीलाई ठुलो त्रास भएको खानेपानी प्रभावित क्षेत्रका अभियान्ता बालकृष्ण देउजाले बताए । नदीमा खेल्न वा सिंचाइको लागि जाँदा पनि स्थानीय त्रसीत हुनुपरेको उनले बताए । अब समय समयमा प्राविधिक रुपमा टिकाउ भए नभएको जाँच गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले सानो मात्रामा सानो क्षेत्रमा पानी हाल्दा भएको दुद्र्दटनाले भोली पुर्ण रु्रपमा पानी पठाउदा झन् ठुलो दुर्घटना हुनसक्ने खानेपानी प्रभावित क्षेत्रका अभियान्ता हस्तले बताए । आयोजनाको लापरवाहीको कारण नै यस्तो घटना भएको उनले बताए । थोरै मात्रामा पानी पठाउदाँ समेत यस्तो दुर्घटना हुनुले त्यसको निर्माण क्रममा नै आयोजनाले चरम लापरवाही गरेको पुष्टी भएको उनले बताए ।
लामो समयदेखि मेलम्चीको पानी पर्खीरहेको काकाकुल काठमाण्डौंको छिट्टै पानी खान पाउने सपना समेत दुईजना कर्मचारीसँगै घाइते भएको छ । आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा तीनवटा फरक फरक कम्पनीले ठेक्का लिएर काम गरेकोले कुन कम्पनीले कहिले बदमासी ग¥यो भन्ने पनि कुनै तथ्य फेला पार्न सकिन्न । कारण जे सुकै भएपनि कसैको लापरवाहीको कारण कसैको जिउधनमाथी असर पार्न हुदैंन ।
« सडकमा पहिरो आतंक :डोजर चालकलेनै गर्छन सडकको डिजाइन
चोर भनी कुटपिट गर्दा मृत्यु भएका युवकका आफ्तले घेरे बालाजु प्रहरी वृत »